Warkii ugu danbeeyey ee naga soo gaadhay Gobolka Togdheer,Wasiir Warancade oo gaadhay iyo waan-waan socota. | Salaan Media
Warkii ugu danbeeyey ee naga soo gaadhay Gobolka Togdheer,Wasiir Warancade oo gaadhay iyo waan-waan socota.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancade ayaa Shalay galab ku soo laabtay magaaladda Burco kadib
Burco (SM) 30.08.2013 Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancade ayaa Shalay galab ku soo laabtay magaaladda Burco kadib markii ay xaalad amaan daro ka soo cusboonaatay deegaanka Waraabeeye oo ay saaka ku dagaalami gaadheen Ciidan beeleed diidan sahanka Shiidaalka ee laga fulianyo dhulkaasi.
Sida uu ku soo waramayo Wariye Ku Sugan Gobolka Togdheer waxa saaka iska hor imaad dirqi kaga badbaaday ciidan Beeleed xoog u hubaysan iyo shaqaalaha Shirkadda Genel Energy, waxaanay taasi sababtay shaqaalaha Shirkadaasi in ay dib uga soo laabtaan goobihii ay hawsha ka fulin lahaayee.
Xukuumadda oo ka walaacsan xooga iyo awooda Ciidan Beeleedkaas is a soo urursaday iyo Ciidan ka tirsan RRU-da oo ay xukuumaddu geysay si ay u difaacaan Hawl wadeenada shirkadda ayaa sababtay in Wasiir Warancade loo yeedho si uu u dhex galo arrinta.
Ilaa hada lama oga warancade in uu magaaladda Burco ka baxay oo uu tagay deegaanka Waraabeeye oo ku began Hawda Burco iyo in uu wali Burco ku sugan yahay, hase yeeshee waxa la filayaa Xaaladda oo meel adag maraysa awgeed in uu dhex galo.